“အတွေးစလေးတွေ”: ဘုရားများကို အားနာခြင်း . . .
Posted by Han Kyi at 12:03:00 pm
အရှိုက်ကိုတည့်တည့်ထိတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးဖြစ်မယ် ဟိဟိ တီတင့်အခုနကမှ တင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်မှာ ဘုရားတည်မိသွားပြီ ဦးဟန်ကြည်ရယ် ... :P
ဒီကနေ့အတွက်တော့ အသက်ရှည်ဆေးသောက်သွားပြီ နည်းနည်းလျှော့ရေးပါအုံး ဖတ်ရတာကြောက်လာပြီ:)
ဆရာပိုစ့် လမင်းဘလော့မှာ မတက်ဘူးဖြစ်နေတာ အဲ့ဒါကြောင့် မရောက်ဖြစ်တာ အခုတောင်ဖေ့ဘုတ်ကနေလာဖတ်ရတယ်။။ :)
ကောင်းလွန်းလို့ မှန်လွန်းလို့ FB ကို မ သွားပါပြီ ဒီလို စာမျိုး ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်။
ကြိုက်လွန်းလို့ ကျမ blog ကောင်းနိုးရာရာ မှာဖေါ်ပြဖို့ကူးယူသွားပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Speechless.. Very very true.. 100% agree with you.
စပ်ပနာရယ်တဲ့မှ ပေါင်းပုံပါဘဲလား ဆရာဟန်။ စွယ်စုံကျော်ထင်ကျမ်းများ ဖတ်နေရလား မှတ်တယ်။
ဘုရားများကိုတော့ သူကြီးမင်းလဲ ခပ်အားနာနာရယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ဘုရားရှိခိုးရင် ဘုရားမျက်နှာကို မော့ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ပြုံးနေသလိုလိုကြီး။ သူကြီး.. မင်းလုပ်တာ ငါ အကုန်သိတယ် ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးလား မှတ်ရတယ်။း)
နတ်အကြောင်းဆိုလို့ ပြောရဦးမယ် ဆရာဟန်။
သူကြီးမင်းတို့ဘက်မှာတော့ နတ်ကိုးကွယ်တာတွေ မရှိဘူး။ ဘယ်အိမ်မှာမှ ဘာနတ်မှ မရှိကြဘူး။ ဘုရားစင်ဘဲ ရှိကြတယ်။ သူကြီးမင်းမမွေးခင်တုန်းကတော့ အိမ်မှာ နတ်စင်လေးတစ်ခု တင်ပစားထားဖူးတယ်တဲ့။ အဲဒီနတ်က ကလေးတွေကို အလွန် ကျီစားတယ်ဆိုဘဲ။ ကလေးတွေ ခဏခဏ ညည ထငိုတဲ့အတွက် အဘိုးက စိတ်တိုကြီး နတ်စင်ကို ဓါးနဲ့ ခုတ်ဖျက်ပြီး နတ်ကိုလဲ တစ်ခါထဲ မောင်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ်တဲ့။ အခုဆို တစ်ရွာလုံး ဘာနတ်မှကို မရှိတော့တာ။ တစ်နှစ်တစ်ခါလောက်တော့ ရွာစောင့်ဦးရှင်ကြီးဆိုလားဘဲ။ အဲဒီနတ်ကိုတော့ တောထဲသွားပြီး ပူဇော်ပသကြတယ်။
အောက်အကျေက နတ်တွေ အထက်ဖက် ဆန်မတက်လာတာ တော်သေးတယ်။ နို့မို့ဆို သူတို့ကလဲ တမှောင့်ရယ်။
စုံစုံစေ့စေ့ ပြုံးပြုံးကြီး ဖတ်သွားတယ် ဆရာဟန်။
ကြောင် ပုဇွန်စား ကြွပ်ကြပ်ဝါး ဆိုတာ ဒါမျိုး ဖြစ်မယ်
အကိုးအကား အထောက်အပံ့တွေနဲ့ ရေးသားတင်ပြထားတာ
စာရှည်ကြီးမှန်းမသိ ပြီးဆုံးအောင် ဖတ်မိသွားတယ်
ကျနော်ကတော့ ဘာဘာသာဝင်မှ ခွဲခြားမနေဘူး
ကောင်းတာ လုပ်ရင် ကောင်းတာ ဖြစ်မယ်လို့ နှလုံးသွင်းထားတယ် အခုလည်း ဖွဘုတ်ပေါ်မှာ အစွန်းရောက်သမားတွေ ကြည့်ပြီး မျက်လုံးမချမ်းသာ ဖြစ်နေရတယ်ဗျာ
ဖြစ်နိုင်ရင် အကုန်လုံး ဘလော့ပစ်လိုက်ချင်တယ်
မချစ်လည်း အောင့်ကာ နမ်းနေရတယ်
ဆရာပြောတဲ့ ဒါနပြုသင့်ပုံလေး ဒါနပြုရင် ထားရမည့်စိတ်ထားလေးကို သဘောကျတယ်။
ဒါနဲ့ ဆရာရေ ဘုရားခေတ်တုန်းကတော့ စာအုပ်တွေ မရှိသေးပါဘူး။ အသံနဲ့ပဲ သယ်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။ ဆဋ္ဌသံဂါယနာရောက်မှ စာအုပ်နဲ့ဘာနဲ့ ဖြစ်သွားတာ။ ပြောချင်တာက ဘာလဲဆိုတော့ ပဋိဝေဓသာသနာလို့ ရေးထားကြတယ်။ ပြီးတော့ ကပ်သုံးပါးကိုလည်း ရောဂန္တရကပ်၊ ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရကပ်၊ သတ္ထန္တရကပ်လို့ ရေးကြတယ်။ ဆရာက စိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင် ဘာပြောချင်သေးလဲဆိုတော့ "ကိုယ်လုပ်မှကိုယ်ရ"ဆိုသလို ပြင်ပကပြဿနာတွေကို ခေါင်းရှုပ်မခံဘဲနဲ့ မြင်ရင်မြင်တယ်မှတ်၊ ကြားရင်ကြားတယ်မှတ်၊ သိရင်သိတယ်မှတ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ငြိမ်းချမ်းအောင် အားထုတ်ဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ အနှီလိုပြောတော့ ဆရာပြောသလို ဖြစ်နေပြီလားတော့ မသိဘူး။ ဘာတဲ့ သူများသေတုန်းက တရားနဲ့ဖြေဖို့ ကိုယ့်မယ်တော်ကြီးလည်း ဆုံးရော ယူကြုံးမရတဲ့ အဖြစ်မျိုး ဖြစ်နေပြီလား မသိဘူး။ ဟိ။ လှစ်မှ...ဘိုင်နော်
သည်လိုစာမူးမျိုးတွေ အပြင်မှာဖြန့်ဝေစေချင်တယ် ဆရာ
ဖတ်စေ မှတ်စေ ချင်လို့ပါ.........။
လှူတာတောင် အလှူမတတ်သေးတဲ့ သတ္တ၀ါတွေ ပေါ့ဆရာ။